War CUSUB oo ka soo baxay sheekada Pogba iyo Man United – Gool FM
War CUSUB oo ka soo baxay sheekada Pogba iyo Man United
Byare July 20, 2016
(Italy) 20 Luulyo 2015. Warar ka imaanaya dalka Talyaaniga ayaa tibaaxaya in Man United ay dhammeystiri doonto heshiiskii ugu qaalisanaa kubbada cagta ay kula soo wareegeyso xiddiga qadka dhexe ee Juventus Paul Pogba.
Man United ayaa laga soo diiday dalab 85-milyan oo bound ay shalay ka gudbisay laacibka reer France iyadoo kooxda reer Talyaani ay ku doonayaan Pogba lacago rikoodh ka noqda suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Laakiin sida ay sheeganeyso jariiradda Corriere dello Sport in Pogba uu dib ugu laabanayo Man United.
Waxaa la sheegayaa in Man United ay ogolaatay iminka lacago Rikoodh ah 105-milyan oo bound oo u dhiganta (125-milyan oo euro) iyadoona jeebka ugu shubi doonta Pogba mushaar dhan usbuuciiba 200,000 oo bound.
Lacagaha uu usbuuciiba heli doono Pogba ayaa gaari doona ilaa 320,000 oo bound marka mushaarkiisa lagu daro xuquuqda sawiradiisa, waxayna midaaa ka yeeli doontaa 23-jirka mid ka mid ah xiddigaha ugu mushaarka badan adduunka.
Corriere dello Sport ayaa intaa ku dartay in Juventus aysan kula tartami karin dhaqaalaha ay Man United dul dhigtay Paul Pogba.
Iyadoo aysan weli jirin war rasmi ah oo xaqiijinaya sheekadan ayaa misane la sheegayaa in Pogba uu ka soo tagayo Turino kuna soo jeedo Man United, waxayna iminka u muuqataa inay lagama maarmaan tahay in Pogba uu dib ugu soo laaban doono Old Trafford afar sanadood kaddib.
Waxaa lagu wadaa in Paul Pogba uu noqdo ciyaaryahanka dunida ugu qaalisan...Ogow 10-kii xiddig ee ugu qaalisanaa Manchester United taariikhda
Ancelotti oo albaabka ka xirtay Real Madrid: Lewandowski iib ma ahan"